Gaari duula oo ay sameeyeen khubaro maxali oo Turki ah ayaa si guul ah uga gudbay tijaabadii ugu… – Hagaag.com
Posted on 21 Seteembar 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Gaariga duula ee Turkiga Cezeri (AL Jazari) oo aqoonyahanno maxali ah farsameeyeen ayaa si guul ah uga gudbay tijaabadii ugu horeysay ee duulista.
Shirkadda Turkiga ah “Baykar”, oo ah soosaaraha gaariga duulaya, ayaa ku sheegtay – hadal ay shalay soo saartay – in nooca gaariga duulaya, oo culeyskiisu yahay 230 kiilo, uu ku duulay masaafo ama joog dhan 10 mitir intii lagu guda jiray tijaabooyinka.
Waxay sharraxday in shaqada gaariga duulaya ay ku bilaabatay qaab fikradeed, ayna ku dhammaatay hirgelinta duulimaadkeedii ugu horreeyay sannad iyo badh gudahood. Waxay cadeysay in gaariga duulaya ee “Cezeri” uu magaciisu ka yimid aasaasihii cilmiga aaladaha wax xukuma ee caalimka muslimka ah ee Al-Jazari.
Agaasimaha Farsamada ee shirkadda, Selcuk Bayraktar, ayaa sheegay inay ku talo jiraan inay sameyaan noocyo horumarsan oo hor leh muddada soo socota, ayna hirgeliyaan duulimaadyo lala socda.
Wuxuu intaas ku daray inay qaadan doonto 10 ilaa 15 sano inta gaariga duulaya ee Cezeri uu ku degayo waddooyinka, 3 ilaa 4 sano gudahoodna waxaa laga yaabaa inaan aragno adeegsi madadaalo ah oo lagu qabto meelaha miyiga ah, sida ATV (All-terrain vehicle). “
Duulimaadkii ugu horreeyay
Warbaahinta maxalliga ah ee Turkiga ayaa ku daabacday, Twitter-ka, sawirro muujinaya gaariga Jazari oo duulaya markii uu bilaabay duulimaadkiisii ​​ugu horreeyay ee hawada Turkiga.
Seynisyahan Badi Al-Zaman Abu Al-Ezz bin Ismail bin Al-Razzaz Al-Jazari ayaa loo arkaa mid ka mid ah culumada ugu waaweyn ee injineernimada taariikhda, waxay hal-abuurradiisa ay gacan ka geysteen furitaanka albaabka soo bixitaanka mashiinno badan oo door muhiim ah ka ciyaaray kacaankii warshadaha ee Yurub, markii dambena noqday halbowlaha ilbaxnimada casriga ah.
Wuxuu ku dhashay jasiirada Ibnu Cumar sidaasna waxaa ku soo baxay magaciisa “Al-Jazari”. Jasiiraddani waxay ka mid ahayd dhulkii Shaam la oran jiray (Levant), maantana waxay raacsan tahay dalka Turkiga waxayna ku taal xadka ay la wadaagto Suuriya. In kasta oo aysan kulaalin meel bad ah, haddana magaca jasiira waxaa loo siiyay iyada oo ku hareereysan Webiyo tira badan.
Injineerkan ayaa loo arkaa mid ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee alifay kuna guuleystay sameynta mashiinada iskood u dhaqaaqa iyadoo aan la riixeyn, Buugiisa loo yaqaan “The Tricks”, waxaa ku jira jaantusyo ka kooban 100 aalad oo makaanik ah, iyo sharaxaad ku saabsan sida mid kasta oo iyaga ka mid ah loo sameeyo. Al-Jazari wuxuu biyo qulqulaya u adeegsaday mashiinadiisa iyo ikhtiraacyadiisa ama wax soo saarkiisa.